Mifampiraharaha Amin’i Eoropa i Tiorkia Mba Tsy Handraisany Mpitsoa-ponenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2016 13:52 GMT
Toby ho an'ny mpitsoa-ponenana ao Tiorika. Sary avy amin'ny Syria Freedom ao amin'ny ebc.com, nampiasàna ny lisansa Creative Commons CC BY 3.0 BR.
Ny 8 Martsa lasa teo, nahatafavoaka drafitra fifanarahana iray ny fihaonan'ireo manampahefana Eoropeana sy Tiorka tao Bruxelles, ka ao anatin'izany dia ho azon'ny Firaisambe Eoropeana (EU) aao ny handroaka ireo rehetra vao tonga hitady fialokalofana ao amin'ireo Nosy Grika hiverina any Tiorkia. Araka ilay fifanarahana, mampanantena i Eoropa fa isaky ny mpangataka fialokalofana naverina hody any Tiorkia dia hanome toerana any amin'ny EU ho an'ny Siriana iray mpitsoaponenana avy ao amin'ny toby Tioka. Tsy iharan'io fifanarahana io ireo mpitsoaponenana avy any Iràka na Afganistàna mandeha amin'io làlana io, no sady tsy ho afaka hangataka fialokalofana any amin'ny EU.
Amin'ity fifanarahana ity, hanidy ny varavarany i Eoropa ho an'ireo mpitsoaponenana, na iza na iza tsy Siriana, ary na ny Siriana aza dia ho asiana fetra tsy azo ihoarana. Midika io fa hampihatra fandroahana eo noho eo ny EU — fandroahana avy hatrany tsy anomezana vintana ireo mpitsoaponenana ho afaka hangataka fialokalofana mihitsy.
Lazain'ny Eoropeana fa ezaka ataony io hanamaivanana ny toedraharaha ao Gresy, firenena iray ianjadian'ny fitobahan'ireo mpitsoaponenana tonga avy any amin'ny morontsiraka Tiorka. Ny tatitra iray nataon'ny Kaomisera Ambony Misahana ny Mpitsoaponenana Avy Amin'ny Firenena Mikambana (UNHCR) ny mamaritra ny toedraharaha ao amin'ny tobin'ny mpitsoaponenana ao Idomeni ao Gresy, izay vao mainka mampitombo ny fijalian'ireo olona an'aliny ao ny orana sy ny hatsiaka :
Mitondra mankany amin'ny tsy fahampian'ny sakafo ny fitobahan'ireo vahoaka marobe, tsy ampy ny fialofana, ny rano ary ny toerana natao ho fidiovana. Mitombo ny disadisa, mandrehitra herisetra ary ahitan'ireo mpampiditra an-tsokosoko ny tombontsoany.
Ho tambin'ny fanekena hamerina an-terisetra ireo mpitsoaponenana, milaza ny EU fa hanome vola fanampiana ho an'i Tiorkia, izay tsy mbola voafaritra hoe ohatrinrona ny habeny, ho fikarakaràna ireo mpitsoaponenana miisa 2,7 tapitrisa ampiantranoiny ao anatin'ny sisintaniny. Toy izany koa, hatsahatr'i Eoropa ny fanomezana fahazoandàlana ho an'ireo teratany Tiorka, manomboka ny Jona 2016 ary ho “toko vaovao” no hosokafana eo amin'ny fifampiraharahàna hidiran'ny Tiorkia ho ao anatin'ny EU.
Marobe ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona no nametraka fanontaiana ny amin'ny maha-ara-dalàna ilay fifanarahana. Ny sampana mpanao asa sosialy eo anivon'ny Fiangonana Katolika ao Espaina dia namoaka fanambaràna iray an-gazety (amin'ny teny Espaniola, torohay amin'ny teny Anglisy eto) mahatsiaro ho tohina mahita fa “ny sarin'i Eoropa ho an'ny sarangan'ny mpiasa dia nipoitra indray ho toy ny famintinana ratsy ireo fepetra famoretana, mampisavoritaka, mikorontana, izay nolaniana tato anatin'ny volana vitsy lasa hamelezana ireo mpitsoaponenana any amin'ny Sisintany Atsinanana”:
Ankizy miezaka ny maka hafanàna amin'ny herin'ny tenany ao amin'ny morontsiraka Grika, taorian'ny fiampitàna mampididoza iray teny ambony sambokely nihizina olona. 15 Aogositra 2015. Sary: Freedom House ao amin'ny Flickr, sehatra ho an'ny daholobe
Manitsakitsaka ny fifanarahna iraisampirenena sy Eoropeana nohamafisin'ireo Firenena Mpikambana ao aminy ilay fifanarahana nifanaovana amin'i Tiorkia mandràra ankitsirano mazava tsara ny famerenana ireo olona niharan'ny antsojay na niharamboina tamin'ny ady…. Ambonin'izany, azo antoka ny hitondran'izany ho any amin'ny fitomboan'ny fijaliana, fanaintainana ary fahafatesan'ireo izay manao sorona ny ainy isanandro mba hitady fiainana tsaratsara kokoa, fahalemana ary fiarovana eny am-baravaran'i Eoropa.
Vincent Cochetel, Eoropeana talen'ny UNHCR, nilaza tao anaty tafatafa iray hoe :
Raràn'ny Fifanarahana Eoropeana momba ny Zon'Olombelona ny fandroahana faobe atao amin'ny vahiny. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna Eoropeana, sy ny lalàna iraisampirenena ny fifanarahana iray misarintsarina fandroahana hiverina any aminà firenena iray hafa.
Ilay fikambanana mpiaro ny zon'ny ankizy “Save the Children – Vonjeo ny ankizy” dia naneho ny ahiahiny momba ity zotra noraisin'ireo firenena Eoropeana ity:
Ny ahiahin'i Eoropa tsy mandeha afa-tsy ny mankany amin'ny fiarovana ny sisintaniny any ivelany sy ny fitazonana ny olona ho ao anatin'i Tiorkia – tsy manomne vintana ny olona marefo sy ireo ankizy mandositra ny ady sy ny fanaovana antsojay ireo izay mba hitady fialofana any Eoropa, izay sady fanitsakitsahana ny lalàna iraisampirenena no fanitsahana ny lalàna momba ny mpitsoaponenana ihany koa.
Nampitandrina i Iverna McGowan, talen'ny biraon'ny Amnesty International miaraka miasa amin'ireo andrim-panjakàna ao amin'ny Fiombonambe Eoropeana, fa ho an'ireo Eoropeana mpitarika, ny famerenana ireo mpitsoaponenana iverin-dàlana “dia mety azo atao eo ambanin'ny lalàna Eoropeana raha vao ‘voatondro ho firenena’ azo antoka i Tiorkia”. Nasehony ny ahiahiny momba izay ho karazana fahazoana antoka azon'i Tiorkia atolotra ho an'ireo mpitsoaponenana:
Tamin-kery no namerenan'i Tiorkia ireo mpitsoaponenana tany Siria, ary marobe ireo mpitsoaponenana ao amin'ilay firenena no miaina anaty toepiainana mahonena tsy misy fialofana sahaza. An'aliny maro ireo ankizy mpitsoaponenana no tsy afaka mahazo fanabeazana ara-dalàna. Tsy azon'ny saina ho eritreretina velively ny hahafahana hihevitra an'i Torkia ho ‘firenena azo antoka’ afaka hanilihan'ny Fiombonambe Eoropeana hanefa ny andraikiny.
Mpifindramonina sy mpitsoaponenana miezaka miaro tena amin'ny orana raha mbola eo am-piandrasana ny hiampitàny ny sisintany manasaraka an'i Gresy sy Makedonia ao Idomeni, 10 Septambra 2015. Sary avy amin'ny Freedom House ao amin'ny Flickr, sehatra ho an'ny daholobe.
Nanakiana mafy ny fanapahankevitry ny Fiombonambe Eoropeana ihany koa ireo mpampiasa tranonkala. Araka ny voasoratr'ilay mpanao gazety, Íñigo Sáenz de Ugarte, ao anaty lahatsoratra iray mitondra lohateny hoe “Ny Firodanan'i Eoropa“:
Fandresen'ny fomba fijery mankahala vahiny ary manavakavaka ataon'ireo governemanta Eoropeana Tatsinanan io, na tsy vitan'izy ireo aza ny nanatratra izay zavatra rehetra nokasainy.
…Nosafidian'ny Fiombonambe Eoropeana ny hamadika an'i Gresy ho lasa toby iray fangiazana lehibe indrindra sy hiaro dingana iray fanao izay ahafahana mamerina any Tiorkia ireo tsy manana zo ho ekena. Ary ho amin'izany dia nanasonia fifanarahana iray tamin'ny devoly izy ireo tamin'ny fanolorana fanomezana maro isankarazany ho an'ny governemanta Tiorka, niditra tamin'ny làlan'ny jadona sy ny famoretana mitovy endrika amin'izay efa nampangain'ireo firenena Eoropeana ihany any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao.
Ramón Lobo, mpanao gazety sy mpifandray an'ady, dia naneho fomba fijery mitovitovy tamin'izany tao anatin'ny tsanganan-dahatsoratra iray nataony ho an'ny InfoLibre:
Araka ny lazain'i Marine Le Pen [avy ao Frantsa], Viktor Orban [avy ao Hongria] ary [Hetsika Alemàna] mandresy i Pergida, araka izany dia mandresy ao Eoropa ny fankahalàna vahiny…. Misy fofona fanoherana ny demaokrasia sy fasista, ary nahoana moa no tsy lazaian izy io, amin'ny zavatra rehetra nolazaina sy natao, ao anatin'ireo fanamarinana atao amin'ny fandroahana ny mpitsoaponenana toy ny hoe ry zareo iny ery no nanitsakitsaka ny lalàna rehefa isika ihany no nanitsakitsaka izany lalàna izany tamin'ny fandàvana tsy hanome fialofana ho an'ireo nandositra ady.
Ao amin'ny Twitter, maro amin'ireo mpampiasa tranonkala no naneho ny hasosorany:
Tsy ireo mpitsoaponenana an'arivony akory no nitondra ny soatoavina ho amin'izay misy azy izao fa ny habibiana itondrantsika azy ireo.
Izay mihitsy. Tsy hisy indrafo ny felaka homen'ny tantara antsika noho ny amin'io. Idomeni.
Fikambanana iray mpanao ‘bizina’ i Eoropa, izay tsy miraharaha ny momba ireo mpitsoaponenana sy ireo zavatra tsy misy dikany rehefa tsy miantraika amin'ny tsena.
Mandritra izany, mitohy ny fifampiraharahàna ary mbola hiaraha-mijery eo, alohan'ny fikatonana tanteraky ny fifampiraharahana amin'ny 18 Martsa, raha toa ireo mpanao politka ka hilefitra amin'ny tsindry mahazo azy ka hanova ireo tolokevitra izay raha ny fahitàna azy dia tsy araka ny lalàna.